22 Jilaa Ee Bollywoodka Katirsan Kuwaaso Shactirada Looga Haray Qeybta 2aad (Best Comedians) (+Sawiro) – Filimside.net
22 Jilaa Ee Bollywoodka Katirsan Kuwaaso Shactirada Looga Haray Qeybta 2aad (Best Comedians) (+Sawiro)
February 20, 2018 Ali Aadan
Taariikhda: February 20, 2018
Bollywoodka waxaa taariikh ahaan soo mareen halyeey fara badan oo taariikhda Bollywoodka baal dahabi ah ka galeen.
Jilaa walba oo Bollywoodka soo mara taariikh ayuu reeba asigo wax uun lagu xasuusan doono maadama qofka wax jilaayo xirfadiisa jilaanimo wax uun ku xeen daabantahay.
Ha noqoto dhanka jaceylka, dhanka dagaalka, dhanka shactirda jilaa walba meel un buu ku wanaagsanaa oo abid laga xasuusan doono.
Balse waxaa jiraan qaar kamid ah jilayaasha Bollywoodka oo dhan walba laga xasuusan doono maadama ay dhan walba ku wanaagsanayeen aadna loola dhacay waligedna la ilaawi doonin.
Tusaale ahaan Akshay kumar oo kale waa atoore Super Star hadana door walba ayuu isku dayey dhanka laadarnimo, dhanka shactiro, dhanka jaceyl dhan walba ayuu wax kajilay hadana waa lagu wada amaanay kaligiis ma ahan Amitabh Bachchan, Ajay Devgan waa xidigo badan oo balse si gaar ah loo yaqaano.
Hadaba waxaan idiin heynaa 22 jilaa oo dhanka shactirada looga taariikh ahaan Bollywoodka, halkaan hoose kaga bogo qeybta labaad ee maqaalkan taxanaha ah.
Waa atoore weyn sido kalena kamid ah liiskan xidigaha Bollywoodka kuwooda shactirada looga haray asigoo bilawgii qarnigan ilaa hada daawadayaasha madadaaliyo xidigaan.
Kumar waxuu sameya aflame badan oo dadka qosolka ka dhameyeen waxaana kamid ah aflaamtas badan Hera Pheri, Phir Hera Pheri, Welcome, Heyy Baby, taxanaha Houseful, Bagham Bhag iyo kuwa kale oo badan.
Uma Devi Khatri:
Waa atirisho bari samaadkii sameyn jirtay doorarka shactirada ah kaliya muuqaalkeda ayaaba ah wax kaa qoslinaayo waana jilaa caan ahed bari samaadkii filmo badana kasoo muuqatay.
Waa mid kamid ah halyeydii bari samaadki waana jilaa caan ah oo kasoo muuqan jiray aflaamta 60kii iyo 70kii waxaana xusid mudan doorkisa shactirada inuu ku hantay sedex jeer abaal marinta shactiroolaha ugu wanaagsan ee shirkada Filmfare Award bixiso.
Boman waa mid kamid ah shactirolaayasha Bollywoodka ee madadaaliyan daawadayaasha waana jilaa caan ah waxaana kamid ah aflaamta uu ku shactireyay Hosueful, 3 Idiots, Munna Bhai iyo filmo kale.
Boqorka qoobka cayaarka iyo shactirada Govinda waxuu kamid yahay atoorayasha ugu maqaamka sareyaan Bollywoodka taariikh ahaan.
Waxaan xusid mudan in Govinda loo caleemo saaray 90kii boqorka shactirada maadama aflaamtisa inta ugu badan madadaalo ahaayen waana atoore kaga qoslinaya shaashada tirisna maleh aflaamtisa shactirada ah.
Wuu Socdaa Maqaalka…..